Fankalazana ny fetim-pirenena: ho tonga hanome lesona ny filoha Paul Kagame | NewsMada
Fankalazana ny fetim-pirenena: ho tonga hanome lesona ny filoha Paul Kagame
Raha tsy misy ny fiovana, higadona, anio na rahampitso, ny filohan’i Roanda, i Paul Kagame. Anisan’ny vahiny lehibe nasain’ny filoha Rajoelina hiaraka hankalaza sy hanamarika ny tsingerintaona niverenan’ny Fahaleovantena, ny 26 jona izao, ny tenany. Tsy tonga fotsiny amin’izao anefa ity filoha ity fa hanome lesona ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy na koa ny mpitondra. Firenena rotiky ny ady an-trano sy ny adim-poko tany amin’ny 15 taona lasa tany ny i Roanda, saingy nijoro ny tenany sy ny vahoakany ka niray feo sy nihavana tao anatin’ny fahasamihafana. Niaiky ny vahoaka any an-toerana fa mbola hifandrafy foana raha fongarina hatrany ny fahasamihafana sy ny tsy fitoviana ary ny resaka foko. Niara-nikaroka ny marina izy ireo ary tsy nitady ny meloka tamin’ireny ady an-trano ireny fa samy tonga saina. Niaiky izy ireo fa tsy mety intsony ny hialokalofan’ireo nanjanaka azy. Nailika ny tenin’ireo vazaha…
Napetraka ny fitsipika fifampifehezana
Napetraky ny filoha Kagame ny fitsipika ifampifehezana ho an’ny olom-pirenena. Tsy nanao jadona akory fa hentitra tamin’izany. Narovan’i Kagame ny fireneny mba tsy hanjakazakan’ny vahiny. Sahy sy nivonona hatrany niatrika ny fianakaviambe iraisam-pirenena izy ireo ary tsy nikoso-maso amin’ireo karazana fepetra napetraky ny avy any ivelany. Nampiarahina amin’ny fepetra samihafa izany. Nosakanan’ny fitondrana tsy hiditra any aminy ny lamba tontan’ny tandrefana, ny “fripy”. Natsangana ny orinasa manamboatra ny entana na lamba“Vita roandey”. Nahavita namorona fitaovana samihafa ireo injeniera teratany ary mitondra ny marika any an-toerana izany.
Nahavita nandefa zanabolana i Roanda
Nahavita nandefa zanabolana “satellite” any ambony tsy taka-maso any ny Roandey, ny 27 avrily teo. Hany firenena afrikanina nahavita finday ao aminy izy. Misy “wifi” maimaimpoana any anaty fiara fitateram-bahoaka ary haingam-pandeha ny “connexion” an-dry zareo. Niroborobo ny famoronana asa ary nisitraka ireny fitaovana vitan’ny mpikaroka sy ny manampahaizana ao aminy ireny ny ankamaroan’ny mponina. Namidiny ny ankamaroan’ny fiaram-panjakana fa mandany vola izany. Nahena avokoa ny karaman’ny mpitondra ambony rehetra. Sahy namaky ady amin’ny kolikoly ka nampiditra am-ponja ireo minisitra na tompon’andraikitra ambony eo amin’ny firenena.
Ankoatra izany, tsy maintsy miditra an-tsekoly ny mpianatra ary ireo zaza teraka taty aorian’ny ady an-trano, nobeazina hanaja lalàna sy tsy maintsy manao asa iombonana ho an’ny firenena.
Firenena voalohany amin’ny fahadiovana
Tsy mahagaga raha firenena voalohany aty Afrika amin’ny fahadiovana i Roanda. Nofeheziny ny resaka fiangonana sy ny finoana fa nahitany taratra ny endrika fanambakana vahoaka izany. Nanana tahan’ny harinkarena faobe ambony indrindra aty Afrika i Roanda ny taona 2015 satria 7,9% izany. Anisan’ny mampiavaka ny filoha Kagame ny fandehanany tahaka ny olon-tsotra eny an-dalana sy amin’ny toerana samihafa eny. Manadio sy mandray kifafa indraindray ary tsy mila mpiambina mirongorongo basy etsy sy eroa manara-dia azy eny ambony fiara na an-dalana rehetra eny. Filohan’ny Vondrona afrikanina ny taona 2018/2019 i Kagame. Olon’ny fampihavanana ary anisan’ireo filoha afrikanina mendrika, indrindra ny taona 2018. Ampahany ihany momba ny filoha Kagame sy ny fireneny ireo… Tokony samy hahay haka lesona amin’izany ny rehetra… Tsy nivarotra ny tenany sy ny taniny ary ny teniny amin’ny hafa i Kagame sy ny fireneny.